Raad Raac News Online – Real Madrid Oo Iska Xaadirisay Wareega 8da UCL Xilli Ay Ka Talaabsadeen 10 Ciyaaryahan Oo Man United Ah.
Real Madrid Oo Iska Xaadirisay Wareega 8da UCL Xilli Ay Ka Talaabsadeen 10 Ciyaaryahan Oo Man United Ah.
Faarax March 5, 2013 0
Kooxda Real Madrid ayaa iska xaadirisay wareega 8da ee koobka Champions League ka dib markii ay wareega 16ka kaga talaabsadeen kooxda Man United oo lugtii labaad kaga badiyeen 2-1 xilli ciyaarta ay saameyn ku yeelatay casaan muran dhaliyay oo la siiyay Nani qeybtii labaad ee ciyaarta.
Real Madrid ayaana sii nooleysay rajadeeda inay hanato koobkii 10aad ee Champions League iyagoo 3-2 wadar ahaan labada kulan kaga gudbay Manchester United.
Tababare Sir Alex Ferguson ayaa ku soo galay ciyaarta iyadoo Wayne Rooney uu kursiga keydka fariisiyay islamarkaana Ryan Giggs uu siiyay kulankiisii 1000aad ee mustaqbalkiisa ciyaareed. Tababare Mourinho ayaa isaga ku soo galay line-upkii la filayay inuu ku soo shirtagayo iyadoo Ronaldo iyo asxaabtiisa ay line-upka kooxda ku soo laabteen ka dib kulankii Barcelona.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si xamaasad leh iyadoo taageerayaasha Old Trafford ay si wacan u soo dhaweeyeen xiddigoodii hore Cristiano Ronaldo, Higuain iyo Van Persie ayaana labo fursadood oo hore isweydaarsaday.
Laakiin fursadii ugu horeysay ee halis aheyd waxaa heshay Manchester United daqiiqadii 21aad ee ciyaarta markii kooner la soo tuuray uu madaxa la helay Nemanja Vidic laakiin waxaa fursadaas ka beenisay birta ka hor inta uusan goolhaye Lopez la raafaadin inuu gacanta ku dhigo iyadoo Welbeck oo kubada kula xafiiltamayna uu ahaa offside xilligaas.
Daqiiqadii 28aad ayaa Khedira uu kubad u qaaday Ronaldo kaasoo la maray Rafael laakiin darbadiisa goolka waxaa block-gareeyay Ferdinand.
Higuain ayaa shabaqa u soo taabtay Real Madrid, laakiin goolka ayaa la diiday ka dib qalad uu ka hor inta uusan kubada Higuain helin uu galay Sergio Ramos daqiiqadii 33aad ee ciyaarta.
Daqiiqad ka dib ayaa goolhaye Deigo Lopez uu badbaadiyay labo fursadood oo isku xiga, marka hore waxa uu kubad darbo xoogan ah ka soo tufay Robin van Persie oo xerada goolka ku dhex jira, ka dibna waxa uu kubada ka bixiyay Welbeck oo damacsanaa inuu ku celiyo.
Angel Di Maria ayaana wax yar ka hor dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta dhaawac ugaga baxay garoonka taasoo keentay in ciyaarta uu bedel ku soo galay xiddiga reer Brazil Kaka.
Waxaana qeybtii hore ay labada kooxood ku kala mareen barbaro goolal la’aan ah ka dib ciyaar adag oo ay soo bandhigeen labada kooxood.
Seddex daqiiqo markii ay socotay qeybta labaad Manchester United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta ka dib markii kubad isku soo laablaabatay uu Nani dhanka bidix baas ka soo dhigay, waxaa sii taabtay Welbeck ka hor inta uusan Ramos lugta raacin oo uusan shabaqiisa kubada dhex dhigin.
Goolka uu Ramos iska dhaliyay ayaana ciyaarta ka dhigtay 1-0 oo hogaanka ay ku qabatay kooxda martida loo ahaa ee Manchester United.
Goolkaas uu Ramos iska dhaliyay ayaana ahaa goolkii 6000aad ee Champions League, tan iyo markii magacaas loo bixiyay 20 sanno iyo seddex bilood iyo bar oo goolkii ugu horeysay ee Champions League la dhaliyay November 1992dii.
Laakiin faraxadii Man United ma aysan waarin ka dib markii garsoorihii Turkiga ee ciyaarta uu casaan toos ah oo muran uu ku jiro siiyay Nani kaasoo qalad ku galay Arbeloa daqiiqadii 56aad ee ciyaarta, taasoo ka careysiiyay United oo uu ugu horeeyay macalinkooda Alex Ferguson.
Real ayaana durbadiiba cadaadis saartay Man United, iyadoo Modric oo bedel uu ku soo galay uu kooner uu soo tuuray uu madax la helay daafaca Varane laakiin waxaa xariiqda goosha kubada ka soo bixiyay Rafael daqiiqadii 62aad ee ciyaarta.
Daqiiqadii 66aad ayaa Luka Modric uu u saxiixay Real Madrid goolkii barbaraha ee ciyaarta ka dib markii uu meel fog ka soo toogtay goolka isagoo aan wax fursad ah siinin De Gea, kubada ayaana ku dhacday birta ka hor inta aysan shabaqa dhex gelin.
Seddex daqiiqo ka dib Real Madrid ayaa hogaanka ciyaarta u qabatay ka dib markii karoos ka yimid Gonzalo Higuain uu shabaqa la helay Cristiano Ronaldo oo mar kale gool ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Man United islamarkaana ciyaarta ka dhigay 2-1 oo Los Blancos ay hogaanka ku heysay.
United ayaana weerar soo qaadeysay dhamaadkii ciyaarta, iyadoo fursad dahabi ah uu goolhaye Lopez ka badbaadiyay Carrick ciyaarta oo 8 daqiiqo ay ka harsan tahay. Daqiiqad ka dibna Lopez waxa uu fursad kale oo halis ah ka beeniyay Robin van Persie. De Gea ayaana fursadoo dhamaadkii ciyaarta ka badbaadiyay Kaka iyo Ronaldo.
Goolka Ronaldo ayaana xaqiijiyay in Real Madrid ay iska xaadiriso wareega 8da Champions League madaama ay 3-2 wadar ahaan labadii lug ee wareega 16ka kaga badiyeen kooxda Shayaadiinta Cas Cas, kuwaasoo si aad ah uga careysnaa ilaa dhamaadkii ciyaarta casaankii garsooraha uu siiyay Nani.
Arsenal ayaana haatan ah kooxda kaliya ee ku hartay Champions League ee ka dhisan horyaalka Premier League.
Dhanka kale kooxda Borussia Dortmund ayaa iyadana xaqiijisatay booskeeda wareega 8da ka dib markii ay ka soo gudubtay kooxda reer Ukraine ee Shakhtar Donestk.